Faahfaahinta Khasaaraha Uu Sababay Roob Laxaad Leh Oo Xalay Hargeysa Ka Da’ay – somalilandtoday.com
Faahfaahinta Khasaaraha Uu Sababay Roob Laxaad Leh Oo Xalay Hargeysa Ka Da’ay
Warbixin ku saabsan Roobkii habeenimadii xalay ka da’ay magaalada Caasimada Hargeysa iyo badbaadooyinka ciidanka Dab-demisku sameeyeen.
Ciidanka Caasimada Hargeysa ayaa ilaa xalay saacado badan ka hawlgalayay Roob weyn oo ka da’ay magaalada hadaba, warbixinta samata bixinta iyo badbaadooyinkii ciidanku sameeyeen raxmaadkii Eebe ee ku hoorey Hargeysa oo faahfaahsan waxay kala tahay :-
1- Badbaado gaadhi Vitz iyo Mark One-10 oo laag galay goobta Isgoyska Togdheer.
2- Guri Buul ah oo gubtay xaafada Sheekh Mubaarig ee degmada Gacan_Libaax.
3-Badbaado gaadhi V8 ah oo waddo la go’aday agagaarka Deero Mall.
4. Badbaado Gaadhi Mark X oo God galay Daami ee degmada Gacan_Libaax.
5. Gacansiin dawlada hoose kaabad duntay goobta agagaarka Deero mall ee degmada 26 June.
6. Badbaado gaadhi Iskarogo ah oo Dooxa galay xaafada Kuwaytiga ee degmada Gacan_Libaax.
Guud ahaan hawlgalada ciidanka Dab-demisku u gurmadeen ilaa hadda ayaan jirin dhimasho iyo dhaawac la soo sheegay, waxaana ciidamadu ku guuleysteen dhamaantood.
Hawlgaladan waxaa iyaguna dhankooda gurmadka ku jiray ciidanka Booliska, cisbitaalka weyn iyo dawlada hoose Hargeysa.
Ugu dambayn Taliyaha ciidanka dab-demisku wuxuu halkan fariin uga dirayaa bulshada inay sameeyaan taxadar dheeraad ah xilliyada Roobabka, sidoo kalena ka fogaadaan Dooxyada, laagaha, biyo mareenada iyo xadhkaha Korontada. Gaar ahaan darawalada gaadiidku ay ciqaab iyo ganaax ku mutaysan doonaan hadii ay isku qaadaan goobaha dooxyada iyo biyomareenada.